Shirweynaha Ganacsiga Somalia iyo Talyaaniga oo lagu wado inuu ka furmo Rooma. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Shirweynaha Ganacsiga Somalia iyo Talyaaniga oo lagu wado inuu ka furmo Rooma.
Caasimadda dalka Talyaaniga ee Rome waxaa lagu wadaa inuu maanta ka furmo Shirweyne looga hadlayo Ganacsiga Somalia “A Business Forum on Somalia”.
Ra’isul-wasaarayaasha Somalia iyo Talyaaniga, Cumar C/rashiid iyo Matteo Renzi ayaa la filayaa inay ka qeyb galaan Furitaanka Shirkaasi oo ay Dowladda Talyaaniga qabanqaabisay, waana Kulankii ugu horreeyey ee ay Dowladda Talyaaniga u qabanqaabiso Horumarinta Ganacsiga Somalia.
Ka hor burburkii Dowladdii Kacaanka waxa uu dalka Talyaaniga ganacsi xooggan ku lahaa Somalia, iyadoo dalkaasi loo dhoofin jirey Badeecado kala duwan oo ay ugu horreeyeen Dalagyadda Mooska iyo Khudaarta kale.
Waxaana jirta Shirkaddii SOMALITA oo ay Labada Dowladood isku dhaafsan jireen Ganacsiyadda kala duwan, oo ay ku jiraan Gaadiidka waa weyn, kuwa yaryar iyo Cgaafcagafyadda Beeraha.
Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Talyaniga, Paolo Gentiloni oo bishii hore ee Federaayo 22-da ka qeyb galay Shirkii Arrimaha Somalia ee lagu qabtay magaalladda Istaanbuul ee dalka Turkiga ayaa shaaciyey inay Dowladiisa qabanqaabinayso Shirweyne looga hadlayo Ganacsiga Somalia.
Wasiirka waxaa kaloo uu tilmaamay inay Dowladiisa taageero ka geystaan Hawlaha Samafalka iyo Soo-celinta Nabadda Somalia, wuxuuna tilmaamay inay Somalia sannadkan u qoondeeyeen lacag dhan 20-million oo Euro, iyadoo 14 million loo adeegsadanayo Horumarinta Hawlaha Samafalka, halka 6 million oo kalena loo qoondeeyey Hawlgalka AMISOM.
Dhinaca kale, Shirweynaha maanta ka furmayo magaalladda Rome waxa uu ku soo aaday iyadoo uu Madaxweynaha dalka Talyaaniga, Sergio Mattarella uu booqasho dhowr maalmood ah ku joogo caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Abeba, waxaana la sheegay qorshaha Safarka Madaxweynaha inaysan qeyb ka ahayn inuu booqasho ku yimaado caasimadda dalka Somalia ee Muqdisho.
Kanada oo laga codsaday inay taageeraan Hawlgalka AMISOM ee La-dagaalanka Alshabaab.